N@y Diary: August 2007
ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ဘယ် Structure နဲ့ကိုက်မလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ဖို့မမေ့နဲ့နော် .. :P
By NayNay at August 30, 20073comments:
By NayNay at August 30, 2007 No comments:
Even Bill Gates Got Confused!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!
This is for your action......
Its really not accepted YOU WON'T BELIEVE THIS!!!!..........but that is
the truth....... ......... ......
This is something pretty cool...and unbelievable. .. At Microsoft the
whole Team, including Bill Gates, couldn't answer why this happened?
So, inform about this to all your friends. Try it now, it will not
create " CON " Folder.
By NayNay at August 30, 20072comments:
By NayNay at August 29, 2007 No comments:
By NayNay at August 23, 2007 No comments:
သြော် လူ့ပြည်လောက၊ လူ့ဘဝကား၊
အိုရ နာရ၊ သေရ ဦးမည်၊
ပြောင်လျက် .. ၀င်းလျက် ကျန်စေသတည်း။
“ကျောင်းဖွင့်ပြီ” ဆိုတဲ့ စာကိုရေး
အရင်က မမြင်ရတဲ့ ဟိုတုန်းက အရိပ်တွေ
နံရံတွေ၊ ခုံတန်းလျားတွေဆီက လွန့်လူးထ
အဲဒါ ... “အောင်ဆန်း” တို့၊ “ကျော်ငြိမ်း” တို့၊ “သိန်းဖေ” တို့၊ “ညိုမြ” တို့ရဲ့
ခု ... သူတို့ရဲ့ ၀ိညာဉ်တွေဟာ
“ကမ္ဘာမကြေဘူး ... ... ...
ငါတို့သွေးနဲ့ ရေးခဲ့ကြတဲ့ မော်ကွန်းတေး ...”
ဒီဘက်ခေတ် ၁၉၈ရ - ၈၈ နှစ်များထဲမှာပါ
တခိျု့ဖတ်တာ .. ကဗျာစာအုပ်
တချို့ဖတ်တာ .. သမိုင်းစာအုပ်
တခိျု့ဖတ်တာ .. နိုင်ငံရေးစာအုပ်
နောက်ထပ် အဖြူရိပ်တခု စာအုပ်ပိတ်
နောက်ထပ် အဖြူရိပ်တခု ထပ်ထွက် ...
... ... နောက်ထပ် ... ...
အရိုးစုတခုက ... ထိုင်ရာမှ ဖြည်းညှင်းစွာထ
အဲဒီမှာ ... အရိုးစုတခုက လက်သီးဆုပ်
“ကမ္ဘာမကြေ၊ ဗမာပြေ .. ဒါတို့ပြေ
ဒါတို့ပြေ ..တို့ပိုင်တဲ့ မြေ” ဆိုတဲ့
သူတို့ရဲ့ တံဆိပ် ... တို့ရဲ့အလံ
ဦးခေါင်းခွံမှာ အရိုးနှစ်ချောင်း ကန့်လန့်ဖြတ်ထားတဲ့ သဏ္ဍန်သာ ဖြစ်တယ်။
“သားရေ အမေ လိုက်ရှာနေတယ်လေ .. သားရေ”
“ဒီမိုကရေစီရရှိရေး ... တို့အရေး”
“အာဏာရှင်စနစ်ကျဆုံးရေး ... တို့အရေး” တဲ့။
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် တခါတည်း အသုဘချရင်း
ဘယ်တော့မှ ... အရံှုးမပေးဘူးဟေ့ ...
ကောင်းကင်ထက်မှာ တိမ်အဖြစ် မိုးစက်ခို
ကျောင်းတော်ကြီးကို မိုးသွေးတွေ ပြန်ရွာချ
လျှပ်တြွေပက်၊ မိုးတြွေခိမ်း ... ... ...
ဒိန်းဒုံး ဆူညံသွားတယ် ...
အဲဒီအခါ ... ကျောင်းတော်မှာ ...
ပန်းတွေ ဖျတ်ကနဲ ပွင့်ကြ
ငှက်ဆိုးတွေ ဝေါကနဲ ထပံျကြ
တို့အရေး .. တို့အရေး .. တို့အရေး .. တို့အရေး
ငါတို့ကျောင်းတော်ကြီးဟာ ... ...
သွေးနီရောင် တောက်ပခါ ...
ဂူဗိမာန်ကြီးပမာသာ တည်ရှိနေပါတော့တယ် ...။
ခု ... သွေးပင်လယ်ကြီးခြားနေပါပြီ ...
“ကျောင်းဖွင့်ပြီ” ဆိုတဲ့ အာဏာရှင်တွေဟာ
တချို့တွေက ကျောင်းတက်လာကြလိမ့်မယ် ...
အဲဒီထဲက တချို့ဟာ ...
ထုံးတံတားကို လျှောက်နင်း ...
ငါတို့ ... နားလည်ခွင့်လွှတ်နိုင်ပါတယ် ...
ထုံးနံ့သင်းတဲ့ ပန်းခင်းကိုဖြတ် ...
အဲဒီလို ... လူစားတွေကိုတော့ ...
သူတို့ဟာ ... သမိုင်းမှာ ...
ငါတို့တွေ သွေးပင်လယ်ကို ဖြတ်ကူးပြီး
ထက်ကောင်းကင် မုန်တိုင်းတို့ အစပိျုး
ငါတို့ထဲက တချို့ဟာ ...
ငါတို့အထဲက တချို့ဟာ ...
ကိုယ့်အသားကိုယ်လှီး လှေနံရံအဖြစ် ခင်းရိုက်
ငါတို့အထဲက တခိျု့ဟာ ...
ဒေါင်းအလံကို ... ဇြောင်းဆန်အောင် လွှင့်ထူရင်း
အို ... သူရဲကောင်းတို့
အို ... ကျဆုံးခဲ့လေသော
မြင့်မြတ်စွာ ကျဆုံးခဲ့သော ...
အို ... ကျဆုံးလေသော
ငါတို့၏ အရေးတော်ပုံ အောင်မြင်ပါစေသတည်း။ ။
သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရဲ့blog မှာမဟုတ်တရုတ်သွားရှုပ်ထားတာလေးပါ ( အဟဲ...ဆားချက်နည်းတစ်မျိုးပေါ့ :P )
အပေါ်ကကဗျာ က မူရင်းကဗျာပါ...
အဲဒါကိုဒီလိုလေးပြန်ပြင်ပြီး comment သွားပေးခဲ့ပါတယ်... ( upgrade လုပ်ပေးလိုက်တာပါ... :P )
chat ပြီးရင်း chat ရင်းနဲ့
မင်းနဲ့ငါ သံယောဇဉ် ဖြစ်ခဲ့ကြတယ်...
နောက်ထပ် chat စရာလူတွေ့တော့
အော်... တကယ်တော့လဲ ..
chat စရာလူတွေပေါပါတယ်ကွယ်.... :P ;P
Present for KZin from Poet NayNay
By NayNay at August 17, 2007 No comments:
I don't want to tell anything about the cases occurred within these few days. I just wanna draw the above picture.
By NayNay at August 16, 2007 1 comment:
ကျွန်မအကြိုက်ဆုံးစာရေးဆရာတွေထဲက တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ဦးမင်းလူရဲ့ ကဗျာလေးတစ်ပုဒ်ပါ....
ရာသက်ပန်ဖျက်သိမ်း ဆိုတာလေး တဆိတ်လောက် တေးမှတ်ထားလိုက်စမ်းပါကွယ်...
By NayNay at August 06, 20073comments: